Karakter Anime 17 izay maotina loatra dia sarotra ny mankahala azy ireo - Hafa
Ireto Character Anime 17 ireto dia maotina loatra ka sarotra ny mankahala azy ireo
manetry tena dia zavatra tsy hitanao matetika amin'ny tontolo tena izy.
Rehefa dinihina tokoa - voahodidin'ny fandaniam-bola be loatra isika, ny olona manandrana 'manaporofo' ny tenany, mampitaha ny tenany ary mampahatsiaro tena zava-dehibe kokoa noho ny olona manaraka.
Toy izany ny fiaraha-monina nampianatra anay mitondra tena.
Ka rehefa mahita olona maotina amin'ny anime ianao izay midina ety an-tany dia toetra azo ekena izay mora hafanaina.
Ireto misy sarimiaina anime izay toy izany ihany!
Ny endri-tsoratra Anime maotina indrindra:
1. Reinhard Van Astrea (Re: Zero)
Reinhard Van Astrea dia avy amin'ny fianakaviana 'van astrea' malaza, fantatra amin'ny maha-mpanjaka azy sy ny tanjany rehefa mampiasa sabatra.
Reinhard tenany dia fantatra amin'ny hoe 'master swordsman' fa na dia mieritreritra aza izy fa somary be loatra ho azy izany.
Ary tsy toy ny BS'in izy na miseho ho be laza. Reinhard Raha ny marina mahatsapa izany.
Tena ambany hatramin'ny farany izy.
Violet Evergarden dia tsy iray amin'ireo olona mafana fo, tsara fanahy ary madio fo indrindra hitako…
Izy koa dia iray amin'ireo tsotra mpilalao fototra n anime.
Raha heverina ho kamboty izy, ARY nampijaliana izy nihalehibe, tsy mahagaga raha maotina sy ambany ety an-tany ny toetran'i Violet.
Ireo traikefa maharary ireo dia mampianatra betsaka an'i Violet momba an'izao tontolo izao, saingy raha tsy efa nanehoany hatsaram-panahy sy fitiavana izy vao misokatra ny fony.
Mifandraika: Lesona 5 amin'ny fiainana ara-pientanam-po dia hampianatra anao i Violet Evergarden
3. Emilia (Re: Zero)
Emilia toa an'i Violet Evergarden noho ny fony madio, toetra 'tsara fanahy loatra'.
Saingy ankoatr'izay i Emilia dia manetry tena ary tsy mirehareha mihitsy momba ny tombontsoany, ny hareny, ny fahefana politikany na ny zavatra hafa aminy.
Raha ny fahitany azy dia tsy misy na iza na iza maninona izay lehibe noho ny tokony ho izy, satria misy zavatra eto amin'izao tontolo izao zava-dehibe kokoa noho ny fitiavam-bola.
4. Oota (Tanaka Kun tsy misy lisitra foana)
Oota dia tsy afaka ho ambany maoderina raha nanery ny tenany izy.
Matotra tokoa, mangatsiaka be, tsara fo ary midina etỳ an-tany ity rangahy ity ka mampihomehy fotsiny.
Ireo mpilalao toa an'i Oota dia tsy miseho matetika loatra, na eo amin'ny tontolon'ny anime, na ny tontolo tena izy.
sary slice of life tsara indrindra antsoina hoe
Izy no karazana 'tena sakaiza' azonao ianteherana hatrany tsy misy ahiahy fa hanindrona anao ao an-damosinao izy.
5. Mikoto Misaka (Railgun Scientific sasany)
Ao an-tanànan'i Academy, toerana iorenan'ny tetikasan'ny anime, misy olona an-tapitrisany antsoina hoe 'espers'.
Ny tsirairay amin'izy ireo dia manana hery mihoatra ny natoraly.
Mba handrefesana ny tanjany, ny olona tsirairay dia omena ambaratonga eo anelanelan'ny 1 sy 5.
Mikoto Misaka dia ambaratonga 5, ankafizin'ny olona sy fantatry ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny City Academy.
Ary na izany aza: tsy avelany ho tonga any an-dohany mihitsy izany, hamontsina ny fitiavany tena, na hamitaka azy hino fa manan-danja kokoa na manan-jo mihoatra ny olona manaraka izy.
Mikoto Misaka no mametraka ny asa na dia eo aza mahatratra ny tampon'ny fahombiazana, izay no antony maha mendrika azy ny laharany. Ary maninona izy no tsotra raha ampitahaina amin'ny espers hafa any Railgun.
6. Heine Wittgenstein (The Royal Tutor)
Hiene Wittgenstein dia ny mpampianatry ny mpanjaka ho an'ny printsy tanora 4. Saingy nandritra ny fahazazany, Heine dia tsy afaka nanantena ny hiafara amin'ny toerana malaza toy izany.
Heine dia manana ilay antsoinao hoe 'fanetren-tena', ary io no mamolavola azy ho olona maotina, manan-tsaina ary tsy mitsara. Izay manana fikasana tsara indrindra ho an'ny hafa foana.
7. Mochizuki Touya (Amin'ny tontolo hafa miaraka amin'ny finday avo lenta)
Mochizuki Touya dia iray amin'ireo endri-tsoratra anime tsotra indrindra izay mahazatra amin'ny andian-tsarimihetsika harem (izay tsy dia manana fivoaran'ny toetra ny MC).
Izany dia nilaza fa Mochizuki Touya dia tovolahy tsotra izay te hiaina fomba fiaina mahafinaritra, manao izay tiany ary misoroka olana.
Ary maotina loatra izy ka tsy miraharaha (na mirehareha) amin'ireo tombontsoa niainany taorian'ny namerenana azy tamin'ny fiainana.
Mitovy amin'i Violet Evergarden, i Erza Scarlet dia ampijalina amin'ny fahazazany. Raha ny tena izy, Erza Scarlet dia andevo zaza izay mahavita mandositra azy tampoka.
Iray amin'ireo olo-malaza mahalala tena indrindra i Erza izay mahalala hoe inona ny fetrany, ary koa ny tanjaka sy talenta.
Saingy satria malala-tsaina izy, miaraka amin'ny fisainana mifantoka amin'ny sary lehibe kokoa, dia afaka nijanona teto an-tany izy. Aza mamela ny tenany ho tratry ny lalao fampitahana na ego.
Mifandraika: Ny teny angano tena malaza indrindra
9. Atsushi Nakajima (Alika Bungou Stray)
Atsushi dia saika tsy misy fiheveran-tena. Ary ahoana no nahavitany?
Tsy indray mandeha akory no nanehoan'i Atsushi fitiavana, fitiavana, fikarakarana na fanajana amin'ny maha-zaza anao.
Raha ny mason'ireo mpikarakara azy dia tsy nisy afa-tsy 'lesoka' i Atsushi fa tsy tokony nisahotaka akory izy ireo handany ny fotoanany.
Ity dia anisan'ny antony mahatonga an'i Atsushi ho tsara fanahy, hangoraka ary hikarakara ny hafa.
Ary mazava ho azy: ny antony antonony loatra. Na dia afaka mandray soa avy amin'ny fanomezana doka ho an'ny tenany aza izy indraindray ary avy eo.
10. Sun Seto (Ny Ampakariko dia zazavavindrano)
Masoandro Seto manana andiam-pitondran-tena sy etika mahery vaika, azonao antsoina izany mpitolona. Tsy vonona ny handrava azy ireo na zavatra hafa na olon-kafa izy.
Tsy ny vola koa.
Mitovy amin'i Erza, fantany ny fahaizany, ny tanjaka ary ny tombony azony. Saingy tsy tafiditra amin'ny lalao ego mihitsy izy, na mirehareha tsy amin'ahiahy amin'ny vola lany amin'ny fanaovana izay hahatsapan'ny hafa ho kely na ambany.
11. Takahashi Tetsuo (Resadresaka amin'ny zazavavy goavambe)
Takahashi dia iray amin'ireo mpampianatra anime tsy dia misy dikany indrindra, tsy dia malaza ary vitsy ny mpankafy no hiresaka.
Mihaino izy, mandinika, milamina ary mora horesahina.
Fa ankoatr'izay, maotina amin'ny fahaizany sy ny fahaizany mandanjalanja izy. Ary tena marin-toetra tokoa fa sarotra ny tsy mankasitraka ilay tovolahy aza satria mazava fa tsy feno diky na be hatsaram-panahy izy.
12. Kenzo Tenma (Monster)
Kenzo dia mpandidy manan-talenta iza no namonjy ain'olona betsaka noho izay azony isaina.
Mampalahelo ho azy anefa, am-piandohana dia ampiasaina sy araraotina izy hahazoana tombotsoan'olon-kafa.
Tsy maninona impiry impiry ny olona midera, manoroka ampondra na manandrana mikapoka ny fitiavany. Kenzo dia mitombina ka tsy mamela an'izany hanaloka ny fitsarany na hamoaka ny fitiavany.
Ego no fahavalo, ary fantatr'i Kenzo izany.
13. Izuku Midoriya (My Hero Academia)
Heveriko fa efa nijery ianao My Hero Academia , noho izany dia mazava ny antony mahatonga an'i Izuku hanao an'io lisitra io.
Rahoviana io rangahy io no mirehareha amin'ny zavatra hafa? Azo antoka fa afaka nirehareha matetika izy, ary nirehareha tamin'ny zava-bitany. Fa mbola.
Izuku dia tovolahy kely 'lehibe noho ny fiainana'.
Fantany fa misy zavatra manan-danja kokoa tokony hoeritreretina. Toy ny lasa maherifo mba hahafahany miaro ny hafa sy miaina ny nofinofiny.
Ary izany no mahatonga anao tsy afaka manampy fITIAVANA Deku amin'ny maha-protagonista azy. Tiana izy ary mora mifandray.
14. Rentaro Satomi (Bala mainty)
Ho hitanao ny lohahevitra iray mihodina amin'ity lahatsoratra ity. Ireo endri-tsoratra izay efa voavonjy, na nanampy, na efa nandalo zavatra mampalahelo tamin'ny lasa, dia foana maotina ary midina ety an-tany.
sary mihetsika tsara indrindra amin'ny fiainana an-tsary
Rentaro Satomi tsy misy hafa.
Nifantoka tamin'ny zavatra manan-danja kokoa noho ny ego-ny izy, na ny fanaovana izay hahatsapany ho lehibe noho ny fahatsapan'ny olon-kafa.
Lehilahy tsara am-po i Rentaro, ary tsy misy na dia iray aza ny fombam-piavotan-tena tsy mendrika hodinihina.
15. Zouroku Kashimura (Alice & Zouroku)
Raha maniry dadabe ianao dia i Zouroku no lehilahy.
Mpandraharaha izy izay mitantana ny fivarotam-boninkazo any Alice & Zouroku.
Tsy hieritreritra ianao fa vao 69 taona monja izy, satria tena velona, ​​finday ary salama tsara noho ny taonany. Ny ankamaroany satria nidina tety an-tany izy, mahitsy ary maotina loatra ka tsy miraharaha ireo zavatra tsy misy dikany.
Rehefa tsy miraharaha zavatra ara-nofo be loatra ianao na manaporofo ny tenanao amin'ny hafa dia manahirana ihany. Ary ho antitra anao izany raha toa ianao ka manao azy.
anime toy ny natao tao amin'ny lavaka mangitsokitsoka
16. Soma Yukihira (Ady amin'ny sakafo)
Zavatra maro an'i Soma. Mamorona, tsy misy fikarakarana, tapa-kevitra ary tsy mitsahatra.
Fa ny zavatra iray izay tsy miharihary momba an'i Soma dia azy toetra maotina.
Mpifaninana izy, fa amin'ny tenany ihany ny ankamaroany. SY tsy hatraiza hatraiza ny fiezahana handroaka ny hafa hanandratra ny tenany.
Ny antony manosika an'i Soma dia tena izy, ary tsy entin'ny ego na avonavona velively izy.
17. Akari Mizunashi (Aria The Animation)
Tena faly i Akari, mahafinaritra, ary feno fiainana izay tsy haiko ny TSY FITIAVANA ny anjara asany amin'ny Aria The Animation.
Mitovy amin'ny toetra toa an'i Shiemi Moriyama, Akari dia tsy manana taolana feno fankahalana amin'ny vatany.
Ary mihoatra noho izany, manana toetra tsara be dia be izy toa ny fahamaotinana, hatsaram-panahy ary saina malalaka izay manaiky ny olona rehetra toa azy.
Taihei Doma (Himouto Umaru Chan).
Alicia Florence (Aria The Animation).
Shiraishi (Tanaka Kun tsy misy lisitra foana).
Kenichi Shirahama (Kenichi Ilay Mpianatra mahery indrindra).
Kenshin Himura (Rurouni Kenshin).
Mami Tomoe (Madoka Magica).
12 amin'ny endri-tsoratra Anime tsara indrindra
Antony 5 Nahoana no Sarotra ny Manao Seho Anime 'Tsara'
Loharano misy sary: Taihei Doma Wallpaper
ny fianarako mahery fo amin'ny tena fiainana
lisitra anime voatonona anglisy araka ny karazany